FUMANA I-AIRTIME YASIMAHLA XA UTHENGA KWA-SHOPRITE!
Kunjalo! Xa uman’ uqhubeka ukuthenga, ufumana ixesha elidana lokuthetha! Khangela ivenkile ekufutshane okanye ufumane iinkcukacha ezithe vetshe ngale promoshini koku kulandelayo.
INDLELA ONGAFUMANA NGAYO I-AIRTIME YASIMAHLA:
Thenga nayiphi na imveliso ephawulwe ngokukhethekileyo.
Inombolo yokuritshaja iza kube ibhaliwe ezantsi kwisiliphu sakho.
Landela imiyalelo ebhalwe ezantsi kwisiliphu ukuze ufake i-airtime yakho yasimahla.
Xa i-ixabiso lonke lifikelela kwi-R5, i-airtime yakho yasimahla izakuqalisa ukusebenza (ngaphandle kweka-Virgin Mobile no-8ta, zona zisebenza xa izike kwi-R10).
I-airtime yasimahla uyifaka kuphela xa kungekho iisenti ezisecaleni (umzekelo i-R6, i-R7, i-R8; hayi i-R6.50, i-R7.27 okanye iR8.13). Iisenti ezishiyeke ecaleni zongezwa kwi-airtime yakho yasimahla elandelayo.
Imalunga nantoni le Promoshini ye-Airtime yaSimahla?
U-Shoprite uthethathethene nabaxhobisi bakhe ngezisulu zentengo ezongezelelweyo ukunika wena, mthengi wethu obekekileyo, inyhweba ye-AIRTIME YASIMAHLA xa uthenga iimveliso zethu ezikhethiweyo eziphakathi evenkileni. Kwaye, wena mthengi, nguwe ozikhethela nayiphi na i-network oyifunayo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba isebenze?
Idla ngokuthatha iiyure eziyi-48 ukuba isebenze. Ngaphandle kwa xa kukho ingxaki nevawutsha OKANYE i-SIM khadi esefounini ingafumaneki. Umzekelo, xa iselula icinyiwe okanye ibhetri yayo icimile idinga ukutshajwa.
Ndiyifaka njani i-airtime yasimahla?
Kufuneka ucofe ikhowudi yevawutsha ngokwalo mzekelo: *130*159*vouchercode#
Xa kuthatha ixesha ukuba i-airtime ingene, kunokwenzeka ukuba uqhakamshelwano lwe-network alikho kakuhle, okanye i-selula yomthengi icinyiwe.
Akukho mfuneko yokuba uyifake i-airtime. Ukuba kukho i-R5 nangaphezulu, iyazingenela ngokwayo kwi-SIM khadi yomthengi.
Ukuba ixabiso layo lingaphantsi kwe-R5, iza kuhlala ingasebenzi de umthengi athenge ezinye izinto, ixabiso lifike kwi-R5 okanye ngaphezulu.
Ndiyijonga njani ukuba ingakanani i-airtime yam eshiyekileyo?
Vela nje ucofe u-*130*159# xa i-balanse ingaphantsi kwe-R5
I-airtime iza kuhlala isebenza iintsuku eziyi-90, kwaye naliphi na ixabiso elishiyekileyo emva koko,
liza kuphelelwa lixesha. Ikhowudi yevawutsha kufuneka icofwe zingaphelanga iintsuku eziyi-90 ithengiwe.
Ikhowudi yevawutsha kufuneka icofwe zingaphelanga iintsuku eziyi-90 ithengiwe.